Ngemuva kokuqhuma kwamabhomu amaphekula eJamana, eDamaseku, bathi akekho umuntu okufanele asondela ngokuthobeka amabhomu amaphekula eSyria. Isikhundla saseRussia asikashintshi. Kuphikisana nokuphikiswa okuhlomile. Kwavuma ukuxoxa ngesixazululo sezepolitiki ngombuso we-Assad. Ukuphikiswa kanye nombuso we-Assad, ukuphikiswa kanye ne-United States kanye neNtshonalanga kuphikiswa noma iyiphi indawo yokuhlala no Mnu Assard uqobo.
Kumandla ashukumisayo ngokuvamile ahambisana nemboni yezobuchwepheshe, abadlali abakhulu embonini yezokupaka bafuna ngenkuthalo yokubambisana nobuchwepheshe obunezinkampani ezincane ezihlotshelwe kakhulu ukusungula nokwandisa imikhiqizo yabo echazwe kakhulu e-Australia ibiza u- $ 10. I-5 billion (cishe ku-United Staten. $ 8 billion)
Futhi zilungele ukubeka esikhwameni somzimba noma imithwalo kanye nama-fugy. Njengawo wonke umuntu ohlwini, banezikhwama ezine ezingasatshalaliswa phakathi kwezimoto eziningi noma izikhwama eziningi. Lapho ukupakishwa sekuvulekile, nokho, asikukhuthazi ukubagcina njalo ngenyanga ukuze kusebenze. I-Flo ne-PAIMAS yakhe iyathandeka ukuthi abashayeli bafuna ikhambi elisha lesifazane.